Shirkadda Xawaaladda ee DAHAB SHIIL oo maanta dhagax dhigtay Isbitaalka Laansareeti qeybta dhimirka
Shirkadda Xawaaladda ee DAHAB SHIIL oo maanta dhagax dhigtay Isbitaalka Laansareeti qeybta dhimirka.
Shirkadda Xawaaladda Dahab Shiil ayaa maanta dhagax dhigtay qeybta Dhimirka ee Isbitaalka Laansareeti ee magaalada Muqdisho, iyadoo munaasabadaasi ay ka soo qeybgaleen Mas'uuliyiinka socotay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Soomaaliya.
Munaasibaddani dhagaxa la dhigayay qaybta Dhimirka ee Isbitaalka Laansareeti waxaa ka soo qeyb galay mas’uuliyiin ka socotay wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, mas’uuliyiinta Shirkadda Dahab Shiil oo ah maalgaliyaasha dhismaha Isbitaalka, saraakiil ka kala socotay maamulka gobolka Banaadir iyo degmada C/casiis, Ururrada Bulshada qaarkooda Dhaqaatiir iyo marti kale.
Furitaanka Munaasibadda waxaa khudbado ka jeediyey mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Isbitaalka laansaleyti, waxeyna si weyn u soo dhaweeyeen in dib loo howlgalliyo qeybta Dhimirka ee Isbitaalkaasi isla markaana ay wax badan ka tari doonto dadka qaba Cudurka Dhimirka.
Sidoo kale waxaa madasha hadal ka jeediyey maamulaha Shirkadda Dahab shiil qeybta gobolka Banaadir C/llaahi Nuur Owdiinle, waxa uuna tilmaamay in aysan aheyn markii ugu horeysay ee ay sidan oo kale ay gacan uga geysato xarunta waxtar u leh shacabka Soomaaliyeed, isagoo intaa raaciyey in ay sii wadi doonaan taageerada noocaani oo kale ah, maadaama ay masuuliyad saran tahay.
Agaasimaha guud caafimaadka Ducaale Aadan ayaa sheegay in Isbitaalka uu yahay mid waqti dheer shaqeynayey, haddana ay qorsheynayaan sidii loo soo nooleyn lahaa oo ay wasaaradda oo kaashaneysa ganacsatada ay dib u dhis ku sameeyaan.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga C/kariin Gabeyre ayaa ugu yeeray Ganacsatada Soomaaliyeed in ay si wadajir ah uga qeyb qaataan dib u howlgalinta xarumaha adeegga Bulshada, maadaama ay yihiin kuwa u dhexeeye umadda oo dhan.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaan masuuliyiinta ka soo qeyb gashay munaasibadda Dhagax dhiga ayaa arrin farxad leh ku tilmaamay in Ganacsatada Soomaaliyeed ay doorkooda qaataan, isagoo si gaar ah u xusay shirkadda Dahab shiil.
Ugu dambeyntii Dr Xabeeb Cali oo ah u qeybsanaha wasaaradda caafimaadka Dhimirka ayaa ka codsay ganacsatada Soomaaliyeed in gacan weyn laga geysto sidii tababar loogu sameyn lahaa shaqaalaha ka howlgalli doono qeybta Dhimirka ee Isbitaalka.
Isbitaalka waxa uu ka mid yahay isbitaallada ugu waa weyn dalka ee ku bur burray dagaallada dalka soo maray, waxaana si gaarka ah loogu xasuustaa in lagu dabiibi jiray dadka qaba cudurka Dhimirka, waxaana hadda rajo wanaagsan laga qabaa in dib loo soo nooleeyo adeegyadii uu Isbitaalkaasi u hayey shacabka Soomaaliyeed.